सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणले लियो नयाँ मोड – Sandesh Press
July 10, 2021 466
चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । शव भेटिनुभन्दा नौ दिन अगाडी अपहरणमा परेकी भनिएकी उनको पोष्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट हुन नसकेपछि प्रहरीले आत्माहत्याको आशंका गरेको हो ।
फरेन्सिक जाँचमा संलग्न चिकित्सकहरुले उनको मृत्यु चोटपटकबाट नभएको बताएका छन् । पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट पनि मृत्युको कारण स्पष्ट नभएपछि भिसेरा परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । भिसेरा जाँच मृत्युको कारण स्पष्ट नभएको अवस्थामा गरिन्छ । यसबाट मृतकले जीवित रहँदा खाएको कुरा र मृत्युअघि कुनै रोग भएको भए, त्यसबारे पनि थाहा हुन्छ ।
यता, आइतबार भण्डारीको शव भेटिए नजिकै पूर्वी चितवनको ब्रह्मास्थानी सामुदायिक वनमा विषको बट्टा भेटिएको थियो ।
पोष्टमार्टम रिपोट स्पष्ट नहुनुका साथै चोटपटक नलागेको देखिनु र शव नजिकै विषको बट्टा भेटिनुले मृत्य रहस्यमय भएको हो । भण्डारीले सोही विष खाएर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । प्रहरीले विष खाएको भए भिसेरा परीक्षणबाट पुष्टि हुने बताएको हो
प्रहरी स्रोतका अनुसार भण्डारीको योनीको जाँच गर्दा जबरजस्ती करणीको पनि कुनै संकेत देखिएन ।
Prevकैलाली घटनामा विवककी दिदीले दिइन् बयान, ‘यो चाँदीको बालाका लागि मात्रै भाईलाई धकेलेकी हैन’ …?
Nextमोडेल निशाको स्वास्थ्य अवस्था बारे जा’नकारी दिदै नर्विक हस्पिटलका डक्टर पहिलो चोटि मिडियामा,यसो भने,, (भिडियो
दसैंको मुखैमा सरकारले गर्यो जनता रुवाउने निर्णय, सबै मारमा पर्ने निश्चित, कहिलेदेखि हुन्छ लागु ?
तीनजना संक्रमित भेटिँदा चिनियाँ सहरमा लकडाउन, घरबाहिर निस्किन पनि प्रतिबन्ध